dagaal ka dhacay degaanka ceel dhuun adeegow una dhow Goofgaduud Buuray | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta dagaal ka dhacay degaanka ceel dhuun adeegow una dhow Goofgaduud Buuray
dagaal ka dhacay degaanka ceel dhuun adeegow una dhow Goofgaduud Buuray
Dagaal Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isku dhinac ah iyo ururka Al-shabaab ku dhexmaray degaano ka tirsan Gobolka Baay.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Ciidanka Dowladda Federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen fariisin Shabaab ay ku lahaayeen Tuulada Ceel-dhuun Adeegow oo 15-KM ujirta degaanka Goofgaduud, waxaan dagaalka ka dhashay khasaare kala duwan.
Gudoomiyaha degaanka Goofgaduud Xasan Isaaq oo la hadlay Idaacadda Radio baidoa ayaa sheegay in ay burburiyeen saldhig ay lahaayeen ururka Al-shabaab, wuxuuna tilmaamay dagaalkan in ay ku dileen ilaa Saddex Dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab, kuwa kalena ay dhaawaceen.
Sidoo kale Guddoomiye Xasan ayaa sheegay dagaalka dhankooda in looga dhaawacay laba Askari, kuwaasi oo uu sheegay in ay ku jireen jiida hore ee dagaalka, dhaawacoodana uu yahay mid fudud.
Wuxuu sheegay Guddoomiyaha wixii hada ka dambeeya in ay qorsheynayaan in ay weeraraan meeshii laga soo sheego Dagaalyahanada Shabaab, dhawaana ay isku furi doonaan wadooyinka xiriiriya Gobolada Baay iyo Bakool.
Ciidamada Booliska gaarka ah ee Maamulka Koonfur Galbeed ayuu sheegay inay hada howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ka wadaan Degaanka iyo hareerahiisa, sidoo kalena lagu baadigoobayo hadii ay jiraan Dagaalyahano Shabaab ah oo ku dhuumaaleysanaya duleedka degaanka.
Ururka Al-shabaab oo dagaalkan uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan ay ku dileen Hal Askari, sidoo kalena ay ku dhaawaceen ilaa laba Askari oo kale.